Mandalay Smart Pay Poised for Rollout | Myanmar Business Today
Home Business Local Mandalay Smart Pay Poised for Rollout
Mandalay residents will soon be able to use Mandalay Smart Pay mobile wallet and online payment app to pay their city bills. Developed by Yadanarbon Bank and 2C2P, its launch is slated for later this month at Mandalay Convention Center.
“At the moment, users pay the bill to the person who delivers the bill slip and use money transfer method for property tax, land tax, electricity bill and waste bill. In two months, users will be able to make payment by scanning the QR code on the bill,” Mandalay Mayor Dr. Ye Lwin said.
The wallet can be used at convenience stores, supermarkets, pharmacies, local shops, restaurants, tea shops and betel nut shops as well as for motorbike taxis, and there are plans to expand it to mobile top-ups and bus and plane ticket bookings.
There will be no payment fee for the payer or recipient, and payment recipients can withdraw the money from AYA Bank or Yadanarbon Bank.
“This isasystem that allows users to make or receive payments without any fees,” the mayor said. “As we aim to make payments easier, the municipal committee bears the charge for every payment.”
In accordance with the Central Bank of Myanmar’s instructions, users can transfer up to K500,000 per transaction and make up to three transactions per day totaling up to K1 million. The app’s security features comprising fingerprint and six-digit password will help secure the money in the account in case the phone linked to the account is lost.
Payment services provider 2C2P is working with various financial institutions, banks, e-commerce and m-commerce businesses.
မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အခွန်အခများကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ငွေပေးချနေိုင်မည့် Mandalay Smart Pay(MSP ွျှallet)စနစ်ကို မကြာမီအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ြကောင်း မန်တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
Mandalay Smart Pay ကို မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ရတနာပုံဘဏ်နှင့် 2C2P Co., Ltd တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မကြာမီအချိန်အတွင်း Mandalay Convention Center၌ မိတ်ဆက်အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“ လောလောဆယ်အိမ်ခွန်၊ ြမေခွန်၊ မီးခွန်၊ အမှိုက်သိမ်းခွန်တွေ Bill လာဝေတဲ့သူတွကေို Mobile Transferနဲ့ ပေးလို့ရပါပြီ။ နှစ်လအတွင်း ွ်ြျ Code ပါ ထုတ်ပေးနိုင်တော့မှာမို့ Bill ပါတဲ့ ွ်ြျ Code ကို Scan လုပ်ပြီး အချိန်မရွေး(၂၄)နာရီပေးချနေိုင်တော့မှာပါ” ဟု မန်တလေးမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲလွင်က ြပောသည်။
အဆိုပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချမှေုစနစ်သည် စည်ပင်အခွန်အခများပေးဆောင်ရမည့် ငွကျေပ်အစွန်း အထွက်များအတွက် ပိုပေးရခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ မည်သည့်ငွေပေးချမှေုမျိုးကိုမဆို ငွေပေး၊ ငွလေက်ခံသူ အတွက်ပါ ငွေြကေးဖြတ်တောက်မှုများ လုံးဝပြုလုပ်မည်မဟုတ်ြကောင်း ဒေါက်တာရဲလွင်ကဆိုသည်။
Mandalay Smart Payကို Convenience Store များ ၊ Supermarket များ၊ သုံးဘီးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဆေးဆိုင်များအပါအဝင် ကုန်စုံဆိုင်၊ လက်ဖက်ဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင်များအထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းရသည့်ငွေြကေးအပေါ် ကော်မရှင်လုံးဝဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ ငွသေားအပြည့်ပြန်ရမည် ဖြစ်ြကောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ Pay ဖြင့် ရောင်းရငွမျေားပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ရန် AYAဘဏ်ခွဲများနှင့် ရတနာပုံဘဏ်များ၌ စီစဉ်ထားြကောင်း သိရသည်။
“ မြို့တော်နေ စားသုံးသူတွအေတွက်သာမက အစားအသောက်နဲ့ပစ်စည်းရောင်းချသူတွအေတွက်ပါ အခြကေး ငွဖြေတ်တောက်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ ဖုန်းနဲ့ငွေပေးချနေိုင်မယ့်စနစ်တစ်ခုပါ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က အကျိုးအမြတ်အတွက် လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ငွေပေးချမှေုတိုင်းမှာ ပြည်သူတွအေဆင်ြပေချောမွေ့အောင် စည်ပင်က ဝန်ဆောင်ခအနေနဲ့ ပေးတာပါ ” ဟု ဒေါက်တာရဲလွင်က ဆိုသည်။
ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ငွေပေးချရောတွင် တစ်ကြိမ်လျှင်ငွကျေပ်ငါးသိန်းအထိ၊ တစ်ရက် အတွင်း သုံးကြိမ်လွှဲနိုင်ပြီး ငွကျေပ်(၁၀)သိန်းအထိ ခွင့်ပြုထားြကောင်း သိရသည်။ လက်ဗွရောလုံခြုံရေးစနစ်နှင့် ဂဏန်း ြခောက်လုံးပါ လုံခြုံရေးစနစ်ြကောင့် မိုဘိုင်းဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ငွထေုတ်ယူ၍မရြကောင်း သိရသည်။ ယင်းအပြင် တယ်လီဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ခရီးသွားကားလက်မှတ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ်များကို အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ပေးချနေိုင်ရန် ထပ်မံစီစဉ်နြေကောင်း သိရသည်။
2C2Pကုမ်ပဏီသည် ငွေြကေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ်များ၊ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှု(e-Commerce)၊ မိုဘိုင်းကုန်သွယ်မှု(m-Commerce)လုပ်ငန်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာငွေြကေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဦးဆောင်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ကုမ်ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Next articleK101 Bn Loans Extended to SMEs under JICA Program